King Kaawuntii keessatti talaallii argachuu - King County
King Kaawuntii keessatti talaallii argachuu
Talaallii dargaggoo Qulqulleessu haqa Gaaffiwwan Deddebi’anii Gaafatamani Waliigalaa
Talaalliin COVID-19 yeroo maraa kaffaltii male argama. Namni kamu wagaa 5 fi olii talaallii argachuu danda'a. Umri 5-17 Pfizer qofa fudhachuu danda'an, umri 18 fi oli Pfizer, Moderna ykn J&J fudhachu danda'an.
Meeshaa Barbaadduu Talaallii WA fayyadamaa ykn or filannoowwaniif odeeffannoo Akkatti talaallii fudhatanii armaa gadii laalaa.
Deggarsi bilbla ni argama
Hikkaa faanii yoo barbaadan ykn gargaarsa onlaayanii yoo barbbadan, sararronii damaqinaan hojatan kan armaan gadittii jiran ni argamu. Yemmuu walqunamtan afaan isiin filatan tuqaa:
Lakkobsa bilbla Deggarsa fi odeeffannoo COVID-19 Isteeta Washingtoni kana bilblaa 1-800-525-0127 ykn 1-888-856-5816 achi booda mallattoo # tana tuqaa. Kan argamu guyyaa wiixata sa'aatti 6AM hanga 10PMti. Kibxata hega Sanbata Guddaa 6AM ---6PMti.
King kawuuntii kan giddu gala COVID-19 206-477-3977 Sa'aati 8AM hanga 7PMti.
Talaallii COVID-19 fudhachuuf hanqina qaamaa yoo qabaattanii fi haalli akka isinii mijaa’u barbaaddan, maaloo 206-477-3977 (8am-7pm, gargaarsi afanii ni jira) ykn publichealthaccommodations@kingcounty.gov qunnamaa.
Odeffannon Kenya inni dhiheenya Afaan Ingiliziitiin asitti kingcounty.gov/vaccine.
Akkamitti talaallii argatu
Talaalliin kaffaaltii malee argamti odoo inshuuransii, lammummaa, ykn haalli baqatummaa kee akka fedhes tahees. Talaallii fudhachuuf mallaqaa sin kafalchiisan.
Eddoowaan talaalli itti keennan hedutti dozii lammaffaa Modernaa fi Pfizer fudhachuu hindandeeta, odoo talaalli duraa bakka biraatis fudhateelle. Maalo kaardi ykn suuraa kaardi talaallii duraa itti fudhatin fidaa.
Waraqaa Beeksisaa (PDF):
Talaallii COVID-19 tiif Akkaataa Beellamaa Itti Qabatan
Gaaffiiwwan yeroo hedduu waa’ee Talaallii COVID-19 manatti kennamu irratti ka’an
Beellama talaalliif maal fiduu akka qabdan fi akkamin gara beellama kee geetta;-
Waanti fiduu qabdan:
Waraqaa eenyummaa guyyaa dhalootaa qabu: Waraqaa eenyummaa isteetaa, gosaa, ykn federaalan kenname ykn hima bankii ykn nagahee kanfaltii kan maqaan kee irra jirus ni fayyada.
Uffata harkaa gabaabdu ykn isinirra lufu kan salphaata dacha’uuf salphaatti irree kee gubbaatti akka talalliidhaaf toltu keeyyadhu.
Waliigaltee nama gaa’eessa eeyyama qabuu: Yoo umrii 18 gadi taate, talaallii argachuuf waliigaltee nama gaa’eessa eeyyama qabu si barbaachisuu mala. Ofumaaf waliigaluu dandeessa yoo kan bilisa baatee taate, yoo nama gaa’eessa fuute/itti heerumte, ykn yoo bakkeen talaallii ati nama umriin daa’imaa bilchaate (Ingiliffaan) jedhee murteesse. Bakkeewwan talaallii martuu murtee umriin daa’imaa bilchaate kennuu hin danda’an. Odeeffannoon dabalataa daa’imanii fi ijoolle umuriin kudha sadii anga kudha sagalii jirtuu, hiikaawwan nama gaa’eesssa eeyyama qabuu dabalatee, asii gaditti dabalame. Yoo namni gaa’eesssi eeyyama qabuu si wajjin beellama talaallii irratti argamuu baate, waliigaltee nama gaa’eessa eeyyama qabuu ykn seeran bilisa ba’uu maalin akka mirkaneeffattu dhiyeessa talaallii kee wajjin ilaali.
Akkamitti achi dhaqqaddan:
Yoo King Kaawuntii keessa jiraatan fi beellama talaallii dhaquuf geejjiba barbaadan, filannoowwan baay’etu jira:
Waan Deemtaniin Barbaadaa: Geejjibaaf, sagaantaawwan tola-ba'uuf, fi imala keessan karoorsuf www.findaride.org ilaalaa. Gaafiwwan ulaagaa guutuu fi odeeffannoo dabalataatif www.findaride.org/covid ilaalaa.
Geejibni Lyft fi Uber faan tola tajaajila geejiba gara bakkaa giddu gala talaallii geessu, ni deebisus. Waa’ee saganta Uber fi saganta Lyft dabalatan baradhaa.
Tajaajila autoobisii: Meetron king kawuuntii tajaajila geejiba gara beellama talaallliitif filannoo baayee kenna jira, Baasii/aoutobisii cehumsa, kenninsa daandii qaxxamursaaf, vaani ummata deeddebistu dabalate .Waa'ee tajaajila geejiba bal'inaan king kawuuntii metro asirra baradhaa. Ykn 206-553-3000 n bilblaa.
Hubaachisa: Bakkeewwan konkoolataan oofan talaallifamanu abbootti dhimma miilan deeman hin fudhattu, konkolaata ykn geejiba dhunfaa gaafatu, kanaafuu bakkeewwan kun geejiba ceehumsatif filanno gaarii moti. Beellama qabaachu keessan dursa namoota talaallii dhiyeessan woliin akka haalli hundu mijaatu mirkaaneeffadhaa.
Kaardii Medicaid ykn Apple Health qabdumoo? Hopelink Medicaid 800-923-7433 irratti bilibilaaf. (Akka ulaagaa guutan mikaneeffadhaa)
Jarroollii ga'eessota ykn rakkoo hir'inna qaama qabdu? Tajaajila metrootif 206-205-5000 ti irratti bilbilaaf. (Akka ulaagaa guutan mikaneeffadhaa)
Beellama geejjibaa namoota baay’ef qabuu yaalaa jirtuu? Unka kana guutaa fi miseensi gareen Hopelink Mobility Management isin wajjin hordofa.
Yoo gargaarsa bilbilaan ykn turjumaana barbaaddan, Sarara Geejjiba Talaallii Qinda'aa (Coordinated Vaccine Transportation Helpline) 425-943-6706 irratti bilbilaa Wiixataa – Jimaataa 8:30 AM – 4:00 PM walakaatti fi 5 xuqaa gargaarsa afaanitiif.
Talaallii erga fudhaatanii booda maal gochuu akka qabdan
Fudhannaa isa lammataa beellama qansiisaa
Yoo kan talaallii gahee marsaa 2ffaa fudhattu ta’ee, bakkaa talaallii keessan isa marsaa 1ffaa fudhatanitti beellama qabadhaa. Fudhannaa lammataa fudhannaa isa jalqabaa irraa guyyoota 21 (Pfizer-BioNTech) ykn guyyoota 28 (Moderna) booda argachuu qabu. Fudhannaan lammataa tika guutuu vaayirasii kenna.
Yoo talaallichi kan Johnson fi talaallii Johnson ta’e marsaa 2ffaa hinbarbaachisu, gaheen marsaa 1ffaa kennamu ittisa gaha kenna.
V-safe dhaf galmaayi
Gidu galeessi To’annoo fi Tika Dhibee (The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) nageenya talaallii to’achuuf meeshaa V-safe jedhamu uume. V-safe meeshaa is a smartphone irratti hundayee ergaa text fi gafiiwwan intarneeta fayyadamudhan ilaalcha fayyaa dhunfaa kenna erga talaallii COVID-19 argattanii booda. Saffisaan CDC ti himuu dandeessu yoo dhiibbaan cinaa isin mudate erga talaallii COVID-19 argatanii booda. CDCn odeeffannoo dabalataa argachuuf deebi’anii isin qunnamuu malu. V-Safe fudhannaa talaallii lammataas akka argatan isin yaadachiisa, yoo barbaachise.
Waa’ee miidhawwan cinaa inni fiduu danda’u maal akka godhamu:
Yoo alarjii amaan isin mudate, 9-1-1 bilbilaa ykn hoospitaala dhiyeenya keessan jiru deemaa. Yoo miidhan cinaa isin yaachise ykn isin irraa deemuu dide isin mudate, hakima keessan bira bilbilaa.
Miidhaa cinaa kan talaallichi qabu Dhaabbata nyaata fi qorrichaati/ Giddu gala to'aanna dhukkubatti gabaasaa, mala Talaallicha gaheessa ittin gabaasan(VARES) dhan. Lakkobsa bilblaa VARES 1-800-822-7967 ykn marsaa hawaasarra https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. Maqaa talaallii fuudhatan dabalaate sanduqa #18 sarara jalqaqaba formii keessatti gabaasa.
Of’eeggannoo COVID-19 mara itti fufaa
Anga guutudhaan talaallii fudhatanitti (erga talaallii dhumaa fudhatanii torbee lamaa booda), namoota biraa tiksuun barbaachisaa dha. Haguuggi godhachu ittifufa, sochii mana keessa fi mana alaa dangeessaa, manatti woli qabamuu fi kanneen biroottin woltuqaarra fi fageenya qaama eeggadhaa, mana keessaa qilleensa hafarsuu fooyyessuu fi harkaa amma ammaa dhiqaachu itti fufaa.
Oduun gaarin tokkicha guutudhaan talaallii fudhanaan, waantota sababa golfichaatin dhaabdan baay’ee isaanii gochuu jalqabuu ni dandeessu.
Yoo guutumatti talaallii fudhatan
Namoonni guutummatti talaallii akka argatanitti kan yaadamu:
Dozii/gahe marsa 2ffaa torban lama keessatti doozii 2 tartiiban akka moderna ykn Talaallii Pfizer ykn
Torban lama talaallii doozi qeenxe akka Johnsoni fi Talaallii Johnsoni
Ergaa talaallii fudhatte yoo torbee lama gad ta'ee fi ammas doozii lammaffaa fuudhachu kan qabdu yoo ta'e ati guutummatti eeggama moti.Sadarkawwan ittisa of eeggannoo hundaa itti fufi hanga guutummatti talaalliifamtutti.
Namoonni guutudhaan talaallii fudhatan kan kanaa gadii beekuu qabu:
Ajajni Isteeta Waashingtan haguuggii bakkeewwan tokko tokko mana baruumsaa fi kunuunsa daa'imanii, kunuunsa fayyaa, bakkeewwan tajaajila mana dhabeeyyii, mana sirreessaa, fi geejjiba hawaasaa dabalatee namni martuu haguuggii akka uffatu gaafata.
Namoonni talaallii fudhatanillee tatamsa’uu COVID-19 dhoowwuf bakkeewwan uummataa mana keessa fi iddoowwan manaa alaa namoonni itti baay’atanitti haguuggii uffachuu qabu.
Yoo imalu barbaaddan (biyya keessa ykn adunyaa irra) ammallee gorsoota CDC imala hordofuu qabdu.
Mallattoowwan COVID-19 caqasaa keessayyuu yoo naannawaa nama dhukkubsatee turtan. Yoo mallattoowwan COVID-19 qabaattan, qoratamaatii mana turaa namoota biraa irraa fagaadhaa.
Yoo nama COVID_19n qabametti saaxilama beekamaa qabaattan, erga saaxilamtaan guyyoota 3 ykn caala booda sakata’amaa, fageenya hawaassummaa fi mallattollee to’adhaa torbeewwan 2. Yoo mallattoowwan qabaattan malee qobaa kaa’amuun isin hin barbaachisu mala. Odeeffannoo dabalataatif qajeelcha adda ba'uu fi qobaa kaa'amuu keenya dubbisaa.
Qajeelcha bakkee dalagaa keessanii hordofaa. Hojjachiftonnii fi dhaabbatoonni taatewwan irratti argamuuf ykn dalagaa tti deebi'uuf mirkaneessaa talaallii fudhachuu gaafachuu danda'u. Warroota hanqina qaamatii ykn sababiiwwan biraa tii talaallii fudhachuu hin dandeenyefi haalli akka mijaa'u ni gaafatama.
Qulqullina qilleensa mana keessaa karaa warraaqii qilleensaa fi calala gaaridhaan foyyessuun COVID-19 irraa nu eeguf haalan murteessa dha. Odeeffannoon dabalataa Qilleensa Mana Keessaa Fooyyessuu. Irratti ni argama.
Bakkeewwan uummataatti namoonni talaallii fudhatanillee haguuggiiwwan ufachuu itti fufuu filachuu danda’u. Namoonni talaallii fudhatan tokko tokko yoo dhibee amaaf sodaa olka’a qabaatan, haala fayyaa duraa qabaatan, ykn nama sodaa olka’aa qabu dhiyeenyatti wal qunnaman haguuggii ufachuu itti fufuu filachuu danda’u. Warri kaan ufachuu-haguuggii namoota talaallii hin fudhatin deeggaruuf ykn akkas gochuun waan itti toluuf haguuggii ufachuu itti fufuu filachuu danda’u. Namoonni tokko tokko dhukkubbiiwwan afuura baafachuu ykn alarjiiwwan irraa of tiksuuf haguuggii ufatu.
Hega ammatti nuutis hangam akka talaalliin kun tattamsa'u COVID-19 kana ittisuu baruu jirra, haroomsas tolchina adeemsan. Qajeelfama namoota guutummatti talaallii fudhatani fi haroomsaf marsaa CDC kana ilaalaa.
Daa’imaniifi umriin isaani kan kudhanaan keessa jiranif oddeffannoo dabalataa
Waa’ee talaallii dargaggoof uulagaalee eeyyama kennuu dabalatee jiru asitti kingcounty.gov/youthvaccine/oromo baradhaa.
Namoota Jaaraniif odeeffannoo dabalataa
Talaalliiwwan eessatti dhiyaata amma?
Dhaabbatoota Kunuunsa Yeroo-Dheeraa, jiraatota maneen narsii, iddoo gargaarsan jiraatan fi dhaabbatoota kunuunsa yeroo-dheeraa biraa tokko tokko talallii bakkuma jiranitti mana korichootaa wajjin ta'uun argachaa jiru.
Sirnoota Kunuunsa Fayyaa, doktaroota, hoospitaalota, fi kiloinikoota kawaasaa dabalatee, karaa bu'uuraa namoonni jaaran King Kaawuntii keessaa talaallii argatan.
Garee Talaallii Socho'aa, Fayyaa Haawaasa fi Dippartmentii Ibiddaatin qindaa’anii, warra Manneen Maatii Gurguddoo (Adult Family Homes) ,mana gurguddoo fi gatii gad bu’a keessa jiraatani dabalatee namoota jaaran haalan saaxilamoo ta’an qaqabaa jiru.
Talaalliin qabiyyeen guddaa ta’e kallaatti, Qindoominna dhaabbillee fayyaa, Garee dhaqabinsa kibbaa king county du’aa fi dhibee Covid 19 namoota jarroolii fi ga’eesota dabalate namoota dhunfaa kan ofii dande’aan hin jiraanne fi kunuunstotasanif.
Manneen Korichaa: Akkuma lilmoo qofaa mana korichaa nannawaa keessanii, manneen korichaa baay’ee – suuqota meeshaa nyaataa dabalatee – argatanitti, beellamoonni talaallii COVID-19 dhiyeenya kanatti ni argattu.
Kilinikoota ummata ykn amantarratti hunda’ee): Iddoowwan nyaataa, gidu-galeeyyii jaarollee fi dhabbatoota amantii fakkiiwwan iddoo kilinikoonni yeroo gabaabaa itti karoorfaman, akkamua talaalliiwwan dhiyaataniin.
Talaallii fudhachuu Mana-Keessaa filannoo namoota duloomoo manatti afaniiti. Gareen talaallii warraaqan fi warren kunuunsa fayyaa kennan eyyamamoon yaala mana-keessaa dhiyeessan.
Link/share our site at kingcounty.gov/vaccine/oromo